Antanimietribe Moramanga : resy lahatra hiaro ny ala ny mponina | NewsMada
Antanimietribe Moramanga : resy lahatra hiaro ny ala ny mponina
Zana-kazo mihoatra ny 10.000! Toerana manakaiky ny faritra iasan’ny Tetikasa Ambatovy ny any Antanimietribe, distrikan’i Moramanga. Faritra ahitana ala, sy zavamananaina mila arovana. Resy lahatra amin’izany ny mponina, indrindra ny Tetikasa Ambatovy, ka nandray andraikitra hiarovana azy ireo. Manana fandaharanasa manokana hiarovana ny tontolo iainana ity orinasa mitrandraka harena an-kibon’ny tany ity, toy ny famerenana ny ala, ny tontolo maitso, ary ao anatin’izany ny fambolen-kazo.
Nanombohan’ny Tetikasa Ambatovy sy ny mpiara-miombon’antoka aminy ny asa ny fambolena zana-kazo maherin’ny 10.000. Nanomboka ny volana marsa teo, nifantohana indray ny fikolokoloana, ny fikojakojana azy ireo. Mihoatra ny 2.100 ny zana-kazo voadio, maherin’ny 1.800 ny zana-kazo nambolena nefa maty nosoloina. Manampy ireo, nahatratra 764 metatra ny aro afo hiarovana ny zava-bita amin’ny dorotanety sy ny doro ala.
Santionany amin’ny fiarovana ny tontolo iainana, ny zava-mananaina ataon’ny Tetikasa Ambatovy ity any Antanimietribe ity. Ankoatra izany, misy koa ny fiaraha-miasany amin’ny mpiara-miombon’antoka samihafa, any amin’ny toerana hafa, indrindra any amin’ny faritra vokasiky ny tetikasa, ao amin’ny faritra Atsinanana sy Alaotra Mangoro.